အင်္ဂလန် ပြန်လာတော့မယ့် ထရစ်ပီယာ ၊ ပွဲရွှေ့ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ လီဗာပူး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အင်္ဂလန် ပြန်လာတော့မယ့် ထရစ်ပီယာ ၊ ပွဲရွှေ့ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ လီဗာပူး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နောက်ခံလူ ကီရန် ထရစ်ပီယာ ဟာ နယူးကာဆယ် အသင်း ထံ ပြောင်းရွှေ့ လာတော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒီအပြောင်း အရွှေ့ ကို ထရစ်ပီယာ က ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နယူးကာဆယ် ဟာ အင်္ဂလန် နောက်ခံလူ အတွက် ပေါင် ၁၂ သန်း နဲ့ အပိုဆုကြေးတွေ ပေးချေ သွားရမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကတော့ ကိုဗစ် ကူးစက် ခံရမှု ၊ ဒဏ်ရာ ကစားသမားတွေ ရှိနေမှုတို့ကြောင့် ဒီကြားရက် မှာ အာဆင်နယ် နဲ့ ကစားရမယ့် ကာရာဘောင်ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်း ပေးဖို့ တရားဝင် တောင်းဆို သွားခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် ဂိုးသမား အိုနာနာ ကတော့ မနေ့က အင်တာ မီလန် မှာ ဆေးစစ်မှု ပြီးမြောက် ခဲ့တာကြောင့် ၂၀၂၂ ဇူလိုင်မှာ ပြောင်းရွှေ့ လာဖို့ အတွက် ကြိုတင် စာချုပ် ချုပ်ဆို သွားခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
အိုနာနာ ဟာ အင်တာ နဲ့ ၅ နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲ့ပြီး ယူရို ၃ သန်း အသားတင် လုပ်ခ ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ အကြားမှာ မစ်လန်းနိုင်းလ် အတွက် ညှိနှိုင်းမှုတွေ အဆင်ပြေတော့မယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ လူငယ်လေး ကို အငှား စေလွှတ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် ကိုတော့ ထည့်သွင်း စာချုပ် မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူး မော်ရို အီကာဒီ ဟာလည်း ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းသစ် ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိနေပြီး အီတလီ စီးရီးအေ အသင်းတွေ က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် ကတော့ ကွင်းလယ်လူ ဖရန့် ကတ်ဆီ အတွက် အန်ဒွန်ဘီလီ နဲ့ အလဲအထပ် ပြုလုပ်ဖို့ စပါး အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် ကို ငြင်းပယ် ချ သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အီတလီ လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း အယ်ဘာတီနီ ကတော့ အေစီမီလန် အနေနဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူးလေး အိုရီဂီ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်လို့ အကြံပြု တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်း ကတော့ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီ ဒီယွန် ကို ခေါ်ယူလိုပြီး အသင်းက နောက်ခံလူ အိုင်းမရစ် လာပေါ့တ် နဲ့ အလဲအထပ် ကမ်းလှမ်းဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒေ့ါမွန် အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးလေး အာလင်း ဟာလန်း ကို ဇန်နဝါရီ အကုန်မှာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် ( နွေရာသီ မှာ အသင်းပြောင်းမယ် မပြောင်းဘူး ) ကို ထုတ်ပြောဖို့ အသိပေး ထားတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းဟာ ရိန်းဂျားစ် အသင်းက နေသတ် ပတ်တာဆန် ကို ပေါင် ၁၂ သန်း + အပိုဆုကြေး တို့နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပတ်တာဆန် ကို ခေါ်ယူ လိုက်တာကြောင့် အဲဗာတန် နောက်ခံလူ လူးကပ်စ် ဒင်း ဟာ ဒီဇန်နဝါရီ မှာ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိလာနိုင်တယ် လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘန်လေ အသင်းဟာ ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ အာရွန် ရမ်ဆေး ကို ခေါ်ယူ ဖို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ပေမယ့် ဝေးလ် ကွင်းလယ်လူ ကတော့ ငြင်းပယ် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ဟာ တပတ်ကို ပေါင် ၄ သိန်း ပေးချေ နေရတဲ့ ရမ်ဆေး ကို ရှင်းထုတ် သွားလိုပြီး အခြား ကလပ်တွေ ကလည်း အဆိုပါ လုပ်ခ ကို လျော့ယူမှသာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်သစ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ ဂျာမန် ခံစစ်မှူး ရူဒီဂါ ကို ခေါ်ယူ လို ပေမယ့် ရူဒီဂါ ဖြစ်စေချင်တဲ့ တပတ် ပေါင် ၂ သိန်း ကို တော့ မပေးချေလိုဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ အေတီကို မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ အတွက် မမ်းဖစ် ဒီပိုင်း နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု အဆင်မပြေ ခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန် နောက်ခံလူ ဆာဂျင်နို ဒက်စ် နဲ့ ပြောင်းလဲ ကမ်းလှမ်းဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဆားဘီးယား ရုပ်သံ သူကြွယ် ဒရာဂန် ဆိုလတ် ဟာ ဆောက်သမ်တန် ကို ပေါင် သန်း ၁၁၀ နဲ့ ဝယ်ယူဖို့ အတွက် ၂ ဦး ၂ ဘက် သဘောတူညီမှု ရရှိ သွားပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဗလင်စီယာ အသင်း နည်းပြ ဟိုဆေး ဘော်ဒါလက်စ် ကတော့ ယူရို သန်း ၃၀၀ လောက် အကြွေး တင်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဖာရန် တောရက်စ် ကို ငွေပေး ခေါ်ခဲ့သလို မိုရာတာ လို ကစားသမားမျိုး ကိုပါ ဆက်လက် ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေမှုတွေဟာ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းတွေ နဲ့ ကိုက်ညီ နေသလား လို့ မေးခွန်းထုတ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ကတော့ ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ကမ္ဘာ့ ဖလား အစီအစဉ် အထမြောက် အောင်မြင် ခဲ့ပါက ယူရို ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကိုလည်း ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ပုံစံ နဲ့ ကျင်းပ လို့ ရနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုကာ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ကို သိမ်းသွင်းဖို့ ကြိုးစား လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article လက်ရှိ လီဗာပူးကစားသမား နဲ့ လီဗာပူး ကစားသမားဟောင်း တို့ဟာ ဂျာရတ်အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ခေါ်ယူမှုတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကတ်ကာရီနို
Next Article မေလန်း နိုင်းလ် အတွက် ရိုးမား ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို လက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်